Ballanqaadka anshaxa - World March
Bogga ugu weyn » Ballanqaadka anshaxa
The bani iyo saynisyahan Salvatore Puledda sameeyey 7 1989 ee January ee Florence, caasimadda ah ee humanism taariikhiga ah, baad ah si Galileo Galilei, Giordano Bruno iyo barametereka kale ee sayniska maanta. Munaasabaddan, ballanqaad ayaa lagu sameeyey ka qaybgalayaasha, si ay ula dagaallamaan si xushmad leh si horumarinta sayniska loo geliyo adeegga aadanaha.
Laga soo bilaabo dhacdadaas waxaa ka soo baxay hindisaha Adduun la'aan Dagaal si loo fuliyo ficil kiciya oo qeexaya ballanqaadka dhinacyada daneeya. "Ballanqaadka Anshaxa" ayaa la abuuray oo fal lagu qabtay Jaamacadda Waxbarashada Fogaanta ee Madrid taas oo macallimiinta, macallimiinta iyo ardayda ay ku fulinayeen 10 luqadood.
Waxaan ku jirnaa adduunyo qaar oo doonaya in ay iibiyaan aqoontooda iyo aqoontooda ujeeddo kasta oo qiimo ah. Kuwani waxay dabooli jireen meerkeena mashiinnada dhimashada. Qaar kale waxay isticmaaleen awoodooda u gaarka ah si ay u abuuraan macnooyin cusub oo lagu maareynayo, aamusnaanta, kabixinta niyadda dadka iyo dadka.
sidoo kale waxay ka mid yihiin rag iyo dumar, kuwaas oo loo isticmaalo Science iyo Cilmi si loo yareeyo daal iyo gaajo, xanuun iyo dhibaato ah Humanity, in afka la dulmay ka soo saarto hungaaeada ah, in la siiyo cod ah oo ay siiyaan kalsooni.
Maanta, wakhti yaraanta millatariga ee galbeedka, badbaadinta noocyada aadanaha oo dhan waa loo hanjabay oo dhulka, gurigeena caadiga ah, waxay ku dhejisaa cabsida xayawaanka iyo nukliyeerka nukliyeerka.
Sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa dhamaan cilmi-baadhayaasha, cilmi-baarayaasha, xirfadlayaasha iyo barayaasha aduunka in ay u adeegsadaan aqoontooda faa'iidada gaarka ah ee aadanaha.
Waxaan ku dhaartaa (ku dhaartaa) asxaabteyda, macallimiinta, qoyska iyo asxaabta waligood marnaba u isticmalin noloshayda aqoonta heshay iyo mustaqbalka barashada in ay dulmiyaan bani-aadamka, laakiin liddi ku ah inay dalbaan sii-deyntooda.
Waxaan naftayda ku ballan qaadayaa in aan ka shaqeeyo sidii loo tirtiri lahaa xanuunka jirka iyo silica maskaxda.
Anigu waxaan ka go'an inaan sii xoojiyo xoriyadda fikradda iyo barashada dhaqanka aan rabshad lahayn adigoo raadinaya "u daawee dadka kale sida aan jeclaan lahaa in loola dhaqmo."
Aqoonta wanaagsan waxay keenaysaa caddaalad
Aqoon wacan ayaa ka hortagaya iskahorimaadka
aqoon wanaagsan u keenaysaa in wada hadal iyo dib u heshiisiinta
Waxaan ugu baaqaynaa halkan ka dhammaan jaamacadaha, machadyada cilmi-baarista, dugsiyada sare, dugsiyada for this, go'antahay anshax la mid ah Hippocrates abuuray dhakhtarro waxaa oogi si loo hubiyo aqoonta oo loo isticmaalo in ay ka gudbaan xanuunka iyo dhibaatada si humanize Dhulka.